अमेरिकाद्वारा टस जितेर नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो ! यो जित कस्को ? - News20 Media
अमेरिकाद्वारा टस जितेर नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो ! यो जित कस्को ?
February 8, 2020 February 8, 2020 N20LeaveaComment on अमेरिकाद्वारा टस जितेर नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो ! यो जित कस्को ?
काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालमा भइरहेको त्रिकोणात्मक सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ । कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हुने खेलमा अमेरिकाले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको छ ।
अघिल्लो खेलको टिममा भन्दा नेपाली टोलीमा परिवर्तन भएको छ। सुवास खकुरेल र कुशल मल्ल टिममा आएका छन् भने शरद भेषवाकर र रोहित कुमार पौडेल प्लेइङ ११ मा छैनन्।
कुशलको यो डेब्यु ओडीआई खेल हुनेछ । यसअघि ओमानविरुद्धको खेलमा अर्धशतक बनाएका शरद चोटका कारण बाँकी सिरिजबाट बाहिरिसकेका छन् । उनको स्थानमा वैकल्पिक सूचीमा रहेका सुवाससलाई राखिएको हो ।
टियु क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा दुबै टोली जित्‍ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिदैछन्। नेपाल र अमेरिका दुबै टोली पहिलो खेलमा ओमानसँग पराजित भएका थिए।
अमेरिकी टिम : शौरभ नेत्रभाल्कर (कप्तान), स्टेभन टेलर, करिमा गोरे, आयन हल्याण्ड, अक्ष होमराज, एलमोर हचिनसन, आरोन जोन्स, नोथुस केन्जिगे, ज्याभिएर मार्सल, मोनाक पटेल, निसर्ग पटेल, तिमिल पटेल, क्यामरुन स्टेभेन्सन, रस्ती थोरन ।
म्यानचेस्टर सिटी जालान् त मेस्सी ? यस्तो छ सम्भावना